Sida xalalka saadka u rogaya u habayn kara soo celinta soo celinta suuqa E-ganacsiga | Martech Zone
Sida xalalka saadka u rogaya u habayn kara soo celinta soo celinta suuqa ganacsiga e-commerce
Isniin, November 1, 2021 Isniin, November 1, 2021 Gaurav Saran
Faafida COVID-19 ayaa ku dhufatay dhammaan khibradda wax iibsiga ayaa si lama filaan ah oo gebi ahaanba isu beddeshay. In ka badan 12,000 Dukaamada bulukeetiga iyo hoobiyaha ayaa la xidhay 2020 iyadoo dukaamaystayaasha ay u guureen inay online wax uga iibsadaan raaxada iyo badbaadada guryahooda. Si loola socdo isbeddelka caadooyinka macaamilka, ganacsiyo badan ayaa balaariyay joogitaankooda e-ganacsiga ama waxay u guureen tafaariiqda internetka markii ugu horeysay. Iyadoo shirkaduhu ay sii wadaan inay ku socdaan isbeddelka dhijitaalka ah ee habka cusub ee wax iibsiga, waxay ku dhufteen xaqiiqada dhabta ah ee ah in marka iibka internetka uu kordho, sidaas oo kale soo laabashada.
Si loola socdo baahida habbaynta soo celinta macaamiisha, tafaariiqleyaashu waa inay adeegsadaan saadka rogan ee teknoolojiyadda karti u leh si ay gacan uga geysato hagaajinta habka soo celinta, baabi'inta dhaqdhaqaaqa soo celinta been abuurka ah, oo ay gaaraan faa'iidada ugu badan. Isku dayga in lagu dhex maro biyaha mugdiga ah ee ka-soo-celinta soo celinta waxay noqon kartaa hab-raac adag oo u baahan caawinta khubarada saadka dibadda laga keenay. Ka faa'iidaysiga a Soo celinta Nidaamka Maareynta (RMS) oo leh muuqaal la xoojiyey iyo tafaariiqleyaasha raadraaca sare waxay si fiican u maamuli karaan soo celinta, wanaajiya dakhligooda, iyo kor u qaadi karaan qiimaynta macaamiisha.
Waa maxay Nidaamka Maareynta Soo Celinta (RMS)?
Mareegta RMS waxay isticmaashaa soo celinta dib u habeynta heerkeeda shaqo si ay u maamusho oo ula socoto dhinac kasta oo safarka alaabta la soo celiyay, laga bilaabo wakhtiga codsiga la gudbiyay ilaa wakhtiga badeecada asalka ah dib loogu celiyo alaabada shirkadda si dib loo iibiyo, soo laabashada macmiilka ayaa leh. la dhameeyay.
Nidaamku wuxuu ku bilaabmayaa soo celinta soo celinta, kaas oo la hawlgeliyo marka iibsaduhu codsado soo celin. Hadafka xalka RMS waa in la hubiyo soo laabashada macaamilka ee khibradda u leh sida habka wax iibsiga uu ahaa. Xalka RMS waxaa loogu talagalay inuu ka caawiyo shirkadaha inay horumariyaan adeeggooda macaamiisha iyagoo isticmaalaya isgaarsiin toos ah si ay macaamiisha u siiyaan cusboonaysiinta soo laabashadooda, taas oo meesha ka saaraysa baahida wicitaannada dabagalka iyo iimayllada kooxaha adeegga macaamiisha.
Marka codsiga la galo, xalku wuxuu siin doonaa tafaariiqle muuqaal iyo xogo ku saabsan sababta(yaasha) soo noqoshada si loo saadaaliyo kharashyada iyo wakhtiga la xidhiidha soo celinta mustaqbalka iyo la socoshada wax kasta oo aan caadi ahayn, oo suurtagal ah hawlo khiyaano ah ee macaamilka. Waxaa jira siyaabo badan oo uu dukaamaysanuhu u samayn karo khiyaamo soo noqoshada ama soo celinta xadgudubka, laakiin dhammaantood waxay keenaan hal dhibaato weyn oo tafaariiqda - qiimaha.
Ku xad-gudubka isticmaalka macaamiisha siyaasadaha soo celinta waxay kharash gareeyaan ganacsiyada ilaa $ 15.9 bilyan sanad walba.
Isbahaysiga Suuq-geynta Qaranka
Aragtida ay bixiso xal RMS adag inta lagu jiro marxaladaha hore ee soo noqoshada waxay badbaadin kartaa baayacmushtarka khadka tooska ah kharashyada xiddigiska. Marka soo celinta la soo gudbiyo, tallaabada xigta waa in la go'aamiyo in alaabta la soo celiyay uu ka qaalisan yahay in lagu celiyo bakhaarka shirkadda. Tani waxay si gaar ah muhiim ugu tahay ganacsiyada e-commerce ee caalamiga ah ee la tacaalaya kharashaadka dhoofinta sare. Xaaladaha qaarkood, ganacsigu wuxuu u diri karaa macaamiisha alaab cusub oo uu u sheego inuu haysto kii hore. Qalabka RMS wuxuu keenaa xogta loo baahan yahay si loo sameeyo go'aamadan.
Bakhaarrada qaar waxa ay noqdaan kuwo buux dhaafiya soo-noqosho, markaa xalka RMS waxa uu go'aamin karaa goobta sida ugu fiican u shaqaynaysa iyadoo lagu salaynayo baahidooda buuxinta alaabada iyo sida ay ugu dhow yihiin goobta macmiilka. Marka goobta la doorto, alaabtu waxay mari kartaa wixii dayactir ah iyo baaritaan loo arko inay lagama maarmaan tahay ka hor inta aysan diyaar u ahayn inay dib ugu noqoto alaabada.
Tallaabada ugu dambeysa ee habka soo celinta waa baakadda raadraaca iyo soo kabashada. Habka baabi'inta qashinka soo celinta badeecada waa la hagaajiyay, dib u habeyn iyo dib u habeyn kasta oo lagama maarmaan ah ayaa la sameeyaa, soo celinta macaamiisha iyo ganacsiga labadaba waa la dhammeeyaa.
Isku dhafka dhamaadka-ilaa-dhamaadka xal RMS waxay yeelan doontaa la dareemi karo, saameyn joogto ah ganacsiyada e-commerce marka laga eego dhinaca dhaqaalaha iyo adeegga macaamiisha. Qalabka RMS iyo teknoolajiyada ayaa ka caawin kara shirkadaha inay gaaraan natiijada ay rabaan iyagoo kordhinaya faa'iidada, yaraynta khasaaraha dakhliga ee soo celinta qaaliga ah, iyo hagaajinta qanacsanaanta macaamiisha. Maaddaama macaamiishu ay sii wadaan inay qaataan ganacsiga e-commerce, awoodaha RMS waxay siiyan tafaariiqleyda nabadda maskaxda ee loo baahan yahay si ay u bixiyaan adeeg macaamiil oo tayo leh oo ay ku shaqeeyaan iyadoo diiradda la saarayo hufnaanta qiimaha.
ReverseLogix waa dhammaadka-ilaa-dhamaadka, dhexe, iyo nidaamka maaraynta soo celinta si buuxda isku-dhafan oo si gaar ah loogu dhisay tafaariiqda, ganacsiga ecommerce, wax soo saarka, iyo ururada 3PL. Haddi ay noqoto B2B, B2C ama isku-dhafan, ReverseLogix madal ayaa fududaysa, maamusha, oo ka warbixisa dhammaan soo celinta nolosha meertada.
Ururada ku tiirsan ReverseLogix waxay bixiyaan heer aad u sarreeya macaamiishu waxay soo celiyaan waayo-aragnimada, ku badbaadi wakhtiga shaqaalaha ee socodka shaqo ee degdega ah, oo kordhi faa'iidada 360⁰ aragtida soo celinta xogta.
Wax badan ka baro ReverseLogix
Tags: 3 plb2b2cb2cecommercesoo celinta ecommercesaarkasoo kabashada xirmadabaakadda raadraacabaakadda raadraaca iyo soo kabashadasoo celinta tafaariiqdacelintasoo celisaa waayo-aragnimadasoo celisa saadkasoo celinta nidaamka maamulkasoo celiyaa farsamayntadib u habeynta saadkareverselogixRMS
Gaurav Saran waa maamulaha guud ReverseLogix, bixiyaha kaliya ee dhamaadka-ilaa-dhamaadka, dhexe, iyo si buuxda isku dhafan hababka maaraynta soo celinta ee loo dhisay tafaariiqda, ecommerce, wax soo saarka iyo ururada 3PL. Kahor intaan la aasaasin ReverseLogix, Saran waxay hogaaminaysay iibinta shirkadaha Fortune 500 ee Microsoft. Waxa uu jagooyin hoggaamineed ka soo qabtay ururo badan oo bilaw ah, isaga oo si guul leh uga beddelay heerarkii hore una beddelay shirkado kobcineed oo la aasaasay.
Wajiga Cusub ee Ganacsiga E-Ganacsiga: Saamaynta Barashada Mashiinka ee Warshadaha
Tirakoobka Isticmaalka Intarneedka 2021: Xogtu Waligeed Ma Seexan 8.0